Laptop Monitor က ဘာတွေပေါ်နေမှန်းမသိလို့ပါ — MYSTERY ZILLION
Laptop Monitor က ဘာတွေပေါ်နေမှန်းမသိလို့ပါ
ကျွန်တော် Laptop က တစ်ခါတစ်ခါ ထထဖောက်လို့ဗျ ... ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမသိပါဘူးဗျာ ... လုပ်နေရင်းတန်းလန်း စက်က အပြာရေင်ကြီးဖြစ်သွားလိုက် ရောင်စုံတွေဖြစ်သွားလိုက်နဲ့ Monitor က .. Window အသစ်တင်ရအောင်လဲ ကျွန်တော် DVD Rom က ပျက်နေတယ် .. External DVD Rom နဲ့ ကြိုးစားကြည့်တော့လဲ .. မအိုကေဘူးဗျ .. တင်လို့မရဘူး ... ဒါနဲ့ ဆိုင်ကိုပို့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် .. ပို့တောင်မပို့ရသေးဘူးဗျ .. သူ့အလိုလိုပြန်ကောငး်သွားတယ်... ဘာမှကိုမဖြစ်တော့ဘူး တစ်လလောက် ... အဲအခု အဲလိုထပ်ဖြစ်နေပြန်ပြီဗျား ..(တစ်ခါတစ်ခါမှသာ) ... အဲဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဗျို့ ...... ကူညီကြပါ......:106::106::106:
Thanked by 1 boundaryhunter
Memory Card ကိုပြန်စစ်ကကြည့်ပါနော်။ ဖြုတ်ပြီးပြန်တပ်တာမျိုးပေါ့၊ :67:
ဟုတ်တယ်ဗျို့ ကျွန်တော့်စက်တစ်လုံးလဲ အဲ့မျိုးဖြစ်နေတယ် စကရင်မှာကို တစ်ခါတစ်ခါ
လိုင်းတွေအများကြီးနဲ့ ဖြစ်နေတာ lcd မကောင်းတာလို့ပြောတယ်ဗျ ကျွန်တော့ သူငယ်ချင်းကတော့ lcd လဲရမယ်ထင်တယ် တစ်ခါတစ်ခါကောင်းတယ် စက်ခရင်က တစ်ခါတစ်ခါ
Line တွေ အများကြီးပေါ်တာ၊ Screen မှာ Color စုံပေါ်လာတာတွေက Monitor Screen မကောင်းလို့ဖြစ်တာပါ။ တစ်ခါတစ်လေ Screen ထောင့်လေးတွေကို လက်နဲ့ ဖိညှစ်လိုက်ရုံနဲ့ပြန်ကောင်းတာမျိုးရှိသလို အသစ်လဲမှ ကောင်းတာမျိုးလဲရှိပါတယ်။
ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ လုပ်လို့မရင်တော့ ဆိုင်ပို့တာအကောင်းဆုံးပါ ... Computer သမားတော်တော်များများကလဲ Desktop သာကျွမ်းကျင်ကြတာ Leptop ကျတော့ မကျွမ်းတာမျိုးလဲရှိတယ်လေ ....
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ ခုကျွန်တော် တွေ့နေရတာ က ၀င်းဒိုးက တက်လာတဲ့ အသံကြားရတယ် ဒါမယ့်
တစ်ခါတစ်ခါတော့ စက်ကရင်ပေါ်တယ် .. ခုတော့ လုံး၀ ကို မပေါ်တော့တာ (ပိတ်ရိုက်လိုက်ရင် ) ပေါ်တဲ့အခါပေါ်တယ် Divinity ပြောသလို Safe mode နဲ့ ၀င်တာလဲမရဘူ း
ခုတော့ လုံးလုံးကို Screen မှာ Light ပဲပေါ်ပီး တခြားဘာမှကိုမပေါ်တော့ဘူးဗျာ ..
Monitor တပ်ကြည့်တာလဲ ဒီတိုင်းပဲနော် ? Monitor ပေါ်မှာပါ မရဘူးဆိုတော့ LCD ကြောင့်လို့ပြောရမှာလဲခက် ။ Motherboard က on-board display adapter ကြောင့်ဆိုရင်တော့ ပစ္စည်းသင်္ခါရ ပေါ့ကွာ ။ စိတ်မညစ်ပါနဲ့ mother board တစ်ခုလုံးပျက်သွားတာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ် :)
အားပေးတယ်ခင်ဗျ ကို Divinity ကြီးက :2::2:
Laptop တွေစျေးကျနေတယ်တဲ (ကြော်ညာ၀င်တာ):P
မေးခွန်းတွေသိပ်မရှင်းဖူး ။ LCD Display Screen နဲ့Monitor ( Desktop) ခွဲခြားပြီးပြောပါ ။ ဒီနေရာမှာ LCD Display Screen နဲ ့ဘဲပြောတော ့မယ် ။
Laptop က အဟောင်းထင်တယ်နော် ။
1. Laptop က VGA Out Put နေရာမှာ Desktop Monitor ရဲ ့VGA Cable နဲ ့
့ ဆက်ပြီး စမ်းကြည် ့ပါ ။ ရုပ်ပုံထွက်ကောင်းလား / ဆိုးလားကြည် ့ပါ ။
ပုံထွက်ကောင်းရင် LCD ပြစ်ချက် ။ မကောင်းရင် Laptop Mother Board ပြစ်ချက် ။
2. LCD ပြစ်ချက် ဖြစ်နေရင် LCD ရဲ့VGA ကြိုးကို စစ်ဆေးပါ ။(ထိထိ မိမိ ရှိမရှိ ) ။
လိုအပ်ရင်လဲပါ ။ Volt ကိုစစ်ပါ (များသောအားဖြင့်12 V)
3. Power Supply မကောင်းရင်လည်း Volt ထွက်မမှန်ဘဲ အရောင်မမှန်ဖြစ်တတ်တယ် ။
(်Jack Pin ခေါင်းတွေကို စစ်ဆေးပါ ။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဖြုတ်ထုတ်ပြီး PowerSupply
နေရာမှ Circuit ကို ခဲဂဟေ ဆော်ပေးပါ ။
4. Laptop Mother Board (VGA)မကောင်းရင်တော့အတတ်နိုင်ဆုံးဆေး ပြီး
(Thinner ဖြင် ့) / ဖြုတ် ထုတ် တပ် လုပ်ကြည် ့ပါ ။
ဒီအဆင် ့အထိ လုပ်ကြည် ့ပါအုံး ။ ။
အဲလိုစိတ်မကြီးနဲ့လေ lcd ပါ ဂန့်သွားဦးမယ်။အကိုပြောပုံအရဆို ရင် အခု lcd ပါဂန့်သွားပြီထင်တယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ lcd ကဖြစ်တာလို့ထင်တယ်။အသစ်သာလဲလိုက်ဗျိုု့။ဒါမှမဟုတ်ရင်ဆိုင်သာပို့လိုက်
laptop LCD ့က ခက်မယ်နော်.. ပြီးတော့ ရရင်လည်း လက်၀င်မယ်.. အသေအချာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ သူနဲ့ ပြသင့်ပါတယ်..
ဒါမှမဟုတ်.. ဒီမှာ Authorized dealer ရှိရင် သွားရောက် ပြသသင့်ပါတယ်..
bro toe plz laptop screen bar phyit tor lal ma thi woo green screen paw nae tal ta khar ta lay ya tal tal kyu nyi pay par naw
According to your post, you said it works sometimes. That's probably because of VGA card. The most likely problems are "humidity" and VGA loose. I believe it will work better if you can remove that VGA card, clean it and connect it again.
Otherwise, please send it to the shop.